สดุดี 98 TNCV - Nnwom 98 NA-TWI | Biblica América Latina
สดุดี 98 TNCV - Nnwom 98 NA-TWI
4 ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องยินดีถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
7 ท้องทะเลและสรรพสิ่งในนั้น โลกและทุกชีวิตในโลก
TNCV : สดุดี 98
Onyankopɔn, wiase Hene
1Monto dwom foforo mma Awurade. Wayɛ anwonwade bebree! Ɔnam ne tumi ne n’ahoɔden kronkron so adi nkonim. 2 Awurade bɔɔ ne nkonimdi ho nkae; ɔdaa tumi a ɔnam so gye nkwa no adi kyerɛɛ aman. 3 Odii bɔ a ɔhyɛɛ Israelfo no so wɔ ne nokware ne ɔdɔ a ɔdɔɔ wɔn daa no mu. Nnipa a wɔwɔ baabiara ahu yɛn Nyankopɔn nkonimdi. 4 To dwom a ɛma ahosɛpɛw ma Awurade, mo asase nyinaa, momfa nnwom ne ahosɛpɛw nteɛteɛm nkamfo no.
5 Monto ayeyi nnwom mma Awurade! Mommɔ nnwom wɔ nsanku so! 6 Mommɔ ntorobɛnto ne mmɛn na monteɛm ahosɛpɛw so mma Awurade, yɛn hene. 7 Ɛpo ne abɔde a ɛwɔ mu nyinaa monworo so; asase ne biribiara a ɛwɔ so, monto nnwom.
8 Nsu, mommɔ mo nsam; mmepɔw, mommom nto dwom ahosɛpɛw so wɔ Awurade anim, 9 efisɛ, ɔrebedi asase so. Obedi wiasefo so nokwarem.
NA-TWI : Nnwom 98